I-Archive ye-elekthroniki - iSearch
isearch - Dezember 17, 2017
Computer isearch - August 22, 2017 0
Izikhiye zekhompyutha zinikeza okungaphezu kokudluliswa nje okulula kokudlulisela kuwe njengabasebenzisi be-PC futhi abasebenzisi baneliswe kuphela ikhibhodi efanelekile ye-PC yakho ....
Phrinta & Skena isearch - August 21, 2017 0
Amaphrinta we-Laser njengamaphrinta ezomnotho nawo okusetshenziselwa kwasekhaya Namuhla abakopishi bayatholakala kuwo wonke amahhovisi, kuzo zonke iziphathimandla nasemitatsheni eminingi. Lawa madivayisi asebenza ngemisebenzi eminingi an ...
Computer isearch - August 20, 2017 0
I-SSD isifinyezo futhi imele idrayivu yesimo esiqinile noma idiski eliqinile. I-SSD idrayivu evumela ukuthi wena ukwazi ukugcina nokufinyelela idatha, njengekhompyutha ye-RAM ....
Computer isearch - August 16, 2017 0
Ama-routers angaba yi-hardware noma isofthiwe futhi asetshenziselwa ukusabalalisa amaphakethe wenethiwekhi phakathi kwamanethiwekhi ahlukene kwinethiwekhi. I-routers ethandwa kakhulu cishe ...
Computer isearch - August 15, 2017 0
Uma ufuna ukuqoqa ikhompyutha yakho siqu, udinga isibonisi. Kubalulekile ukucabangela kusengaphambili lokho ikhompyutha ...
Izilawuli esikude jikelele
I-TV ne-Home Cinema isearch - Julayi 24, 2017 0
Amadivayisi amaningi alawulwa ngesilawuli esikude, okungaholela ekuchaseni okuhlanzekile. Lena yindlela engcono kakhulu yokuthola okuningi kwakho ...
Umsindo & Hifi isearch - Juni 17, 2017 0
Ziyinto yezinsimbi ezithandwa kakhulu ezodlalwa futhi zizwe emhlabeni wonke: ikhibhodi. Kungakhathaliseki ngezikhathi zemikhosi noma wena, abantu ...
Computer isearch - Juni 17, 2017 0
Amakhadi wemidwebo ephezulu - isivinini esigcwele esizayo Ingabe uyakujabulela ukudlala ngezilungiselelo eziphezulu zokuqhafaza? Ngemuva kwalokho kufanele ubheje amakhadi wehluzo aphezulu. Nge ...
Ukufaneleka isearch - Juni 17, 2017 0
Uma ucingo lufika emhlanganweni ofanele, kubalulekile ukucabangela ukuthi kubaluleke kangakanani. I-referent ingaba nomthelela omubi, uma ...
I-TV ne-Home Cinema isearch - Juni 6, 2017 0
Izibonisi ze-4k zinikeza umthengi ukubonisa okuningiliziwe kunesikrini esivamile. Lezi zivame ukubonisa okukhulu, okuhle kakhulu ...
12Ikhasi le-1 le-2